Iyi yaive ol 'yakasarudzika Can yeWorms | Martech Zone
Iyi yaive ol 'yakasarudzika Can yeWorms
Muvhuro, April 9, 2007 Chipiri, Gunyana 4, 2011 Douglas Karr
Paunorova iwo makumi matatu ekutaura pane blog blog mune rimwe zuva, iwe unoziva kuti wakarova tsinga!
Pandakafunga kudaro kutumira pamusoro pekusagutsikana kwangu kuchangobva kuitika neMasaini makumi matatu nenomwe, hapana kana nzira yandakanga ndichiedza kurova peji rekutanga re TechMeme kana kuti Jasoni Fried ini pachezvangu ndiudze kure. Vaya venyu vanga varipo kwekanguva vanoziva kuti ndiri mukomana akanaka asingade kusimudzira bopoto neangu blog.
Muchokwadi, kana vanhu vakatsamwa neni ndinoedza kubuda munzira yangu kuedza kuenda seshamwari. Tinogona kusawirirana uye tichiri shamwari. Muchokwadi, ini handibvumirane neshamwari dzangu kazhinji kupfuura vanhu vazhinji! Ingovabvunza ivo!
Izvo zvakati, iyo blogosphere inzvimbo yemusango. Hatina, uye hatizombove ne Code of Conduct. Isuwo hatifaniri! Ini ndinotenda chose murusununguko rwekutaura paInternet.
Iniwo ndinotenda mukupesana. Isu pachedu maSheriff mune ino yeWild Wild West uye hatifanire kumira takatenderedza tichiona sevamwe mabloggi anotyisidzira, kunyepa, kana kutopa mazano akaipa. IMHO, iyo yepamusoro simba rako, kunyangwe na Google or Technorati, wakawanda basa rauinaro rekuona kuti unopa chokwadi sechokwadi uye maonero semaonero.
Ndiri kutendeseka pandinotaura kuti ndinoda kuti munditorere basa rangu rekunyora. Ini ndinokuremekedza iwe nekundidenha. Ingoziva kuti kana guruva ragara, ndinogona kuramba ndichipesana newe. Zvakanaka kuti vanhu vaviri vave nemaonero akasiyana emamiriro akafanana. Isu hatigovane maonero akafanana, saka hatife takaona zvinhu zvakafanana.
WordPress NiceAdmin Plugin Shanduro 1.0.0 Yakaburitswa
Kutuka kweGoridhe Ruva
Apr 9, 2007 pa 10: 33 PM
Jason akakuudza here? Kupi ikoko? Iwe usati kana mushure mekunge wadaidza chinyorwa chake "chunk yekusaziva?" Unofunga kuti unogona kufamba uchidaidza vanhu kuti “vasina zivo” wogeza maoko ako pazviri? Wakakanda chibhakera chako.
Apr 9, 2007 pa 10: 44 PM
Aiwa Michael, handisi kugeza maoko angu nazvo. Ndosaka ndakatumira zvakare nezvazvo. Asi ini handidzokeri kushandisa izwi rekusaziva, zvakadaro. Pasi petsananguro dzese dzakakwana dzeizwi, ndizvo chaizvo zvainge zvakatumirwa. Kana paine angada kupa humbowo hwekupesana, ndakasununguka kwazviri. Ndine chokwadi chekuti havazove chero humbowo, zvakadaro. Nokudaro izwi rokuti 'kusaziva'.
Apr 9, 2007 pa 10: 43 PM
Ungati sei munhu asina chaanoziva wobva wahwanda kuseri kwekunge uri 'munhu akanaka'? Uyezve kunyunyuta kuti mukudzivirira maonero avo ivo vaikuudza iwe?
Apr 9, 2007 pa 10: 50 PM
Munhu wandati haazive ndiani chaizvo? Izwi chairo raive, "Mazuva mashoma apfuura, blog yavo yakaunza imwe chunk yekusaziva:". Ini sezviri pachena handisi kuvanda kuseri kwechinhu chero chipi zvacho, SH. Ini handisi mutauriri asingazivikanwe pane blog ndichishandisa mainitials angu. Blog rangu uye chitupa changu zviri pachena.
Kana iyo positi yanga isingazive, SvN yaive nemukana wese wekutsigira zvavanoda nezvimwe zvekuwedzera chokwadi. Vakadaro here? Kwete. Vanogona here? Kwete. Naizvozvo, kusaziva rakanga riri izwi rakarurama.
Apr 10, 2007 pa 12: 20 PM
Douglas, uchiti kunyora kwemunhu haazive unenge uchitomuti ignorant. Mhedzisiro ndeyekuti munyori wechinyorwa haazive, zvisinei nekuti iwe unozvitaura nemazwi akawanda. Vanhu vanonyora, kunyora hakunyori. Kunyora hakugoni kuzvinyora.
Uye kushandisa mavambo angu kunondiita sei munhu asingazivikanwe? Iwe une email kero yangu, inoshanda uye inosanganisira zita rangu rizere. Pandinotanga kunyora mapepa eimba nyowani, ndiri kuzviita ndisingazivikanwe here?
Sarudza mazwi ako zvine hungwaru zvishoma, Douglas. Matauriro ako egumbeze anoratidza kusaziva.
Apr 10, 2007 pa 12: 53 PM
Ndatenda, SH. Zviripachena kuti hatibvumirani zvachose nekushandiswa kwezwi rekuti kusaziva. Zvakanaka, ndinokutendai nekutora nguva. Ndinoshuva kuti dai wanga uri muenzi wenguva refu uye wandiziva… asi ndinofunga haugone kufadza munhu wese nguva dzese.